मेरो बेहोसी पर्दा भयो | नेपालको सम्झना
Browse » Home » रोचक जानकारी » मेरो बेहोसी पर्दा भयो
मेरो बेहोसी पर्दा भयो
नाम त अर्कै हो तर मैले यहाँ उनलाई रवि भनेर चिनाएकी छु  । त्यो दिन हामी एउटा पार्टीमा थियौं । थरीथरीका पेय पदार्थले पार्टीको रौनक बढाएको थियो । मेरो ध्यान रविको क्रियाकलापमा केन्दि्रत भयो । ऊ मतिर पीठ फर्काएर बसेको थियो । ऊ धमाधम वाइनका गिलास रित्याउँदै थियो । रक्सीको गफ चर्कै हुन्छ । गफैगफमा उसले कति गिलास रित्यायो थाहा भएन तर एकछिनपछि ऊ असामान्य भएर मेरा सामु आयो । आˆनो हातको गिलास देखाउँदै भन्यो, 'दिज्यू, हजुरले लिनुभएन ?'
'मैले जुस लिएँ' मैले छोटो उत्तर दिएँ ।
जुसले चिसो गर्छ । जाडोको समयमा यो अलिकति लिए न्यानो हुन्छ नि ।' ऊ नम्रतापूर्वक मलाई वाइन पिउन उत्पे्ररित गर्न थाल्यो ।
'वाइन मेरो शरीरले पटक्कै सहँदैन । त्यसैले कहिल्यै पिउँदिन ।'
'त्यसो भए त भैगो ।'
म ड्रग त लिन्न तर रक्सी पिउँछु । ज्यानले नसहे पनि पिउँछु । एउटा बेइमान गुरुले सिकाइहाल्यो ...। सुन्नुहुन्छ मेरो कथा ?'
'सुनाऊ न ।' मैले भनेँ ।
ऊ मेरो नजिकैको कुर्सी तानेर बस्यो र आफ्नोकथा सुनाउन थाल्यो ।
'त्यसबेला म प्रवीणता प्रमाण-पत्र तहमा अध्ययनरत थिएँ । एसएलसी उत्तीर्ण भएलगत्तै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पोखरामा एउटा कोठा लिई बसेको थिएँ, डाक्टर बन्ने रहर थियो । आमाबुवा पनि छोरो डाक्टर भएको हेर्न चाहन्थे । म डाक्टर बन्ने जोसमा खुब मेहनत गर्न थालँे । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । खाना कोठामै बनाएर खान्थँे । कहिलेकाहीँ पकाउन अल्छी लाग्दा नजिकैको होटलमा खान्थेँ ।
होटलमा खाना खान गएका बेला एकदिन एउटा नयाँ अनुहार म बसेको टेबलमा आएर बस्यो । उसले भलाद्मी पारामा सोध्यो, 'बाबु, यहाँ भूमिसुधारको अफिस कतातिर होला ?' मैले भनेँ, 'यहीँ नजिकै छ । खाना खाएपछि म देखाइदिउँला ।'
मैले पर्दैन भन्दाभन्दै पनि त्यस दिन मेरो खानाको पैसा उसैले तिर्‍यो । हामी साथै बाहिरियाँै । मैले भूमिसुधारको अफिस देखाइदिएँ । त्यसपछिका दिन पनि उसले मेरो पिछा छोडेन । ऊ मलाई भात खान सोही होटलमा बोलाउँथ्यो ।
मलाई उसका क्रियाकलाप मन पर्थे । बेलाबेलामा मलाई मासु ख्वाउँथ्यो । एकदिन उसले आफूले पिइरहेको रक्सी मेरो रित्तो थालमा थोरै खन्यायो र भन्यो-'यो चाख, खुबै मीठो हुन्छ ।' मैले थालमा भएको पेयपदार्थ चाटेँ । त्यसबेलाको मेरो अनुभवले भन्यो-छि, कत्ति नमीठो, मानिसहरू किन र कसरी खान्छन् यस्तो बेस्वादको चीज.... ।'
अर्को पटक पनि उसले मेरो गिलासमा थोरै रक्सी खन्यायो । त्यसबेला भने मासुका साथ रक्सी केही मीठो भयो । मैले आधा गिलास एकै सासमा रित्याएँ ।
विस्तारै उसले मलाई रक्सी पिउने साथी नै बनायो । बडो राम्रो उपदेश दिन्थ्यो ऊ । सानो मानिसले धेरै पिउनुहुँदैन । आन्द्रामा प्वाल पर्छ, तर थोरैथोरै पिइयो भने ज्यान बलियो हुन्छ, पढ्न खुब जोस आउँछ ।
आफूलाई डाक्टर बन्नु थियो । पढ्न जोस आउने कुरा पाएपछि के चाहियो अब ? मेरो सम्पूर्ण ध्यान रक्सीमा खनियो । 'कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर' भन्ने उखान लागू भएपछि एसएलसीमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको म आई.एस.सी.मा फेल भएँ । यस्तोे नतिजाले मनमा नैराश्यता छायो । मन खुसी बनाउन फेरि रक्सीकै शरण लिएँ । डाक्टर बन्ने मेरो सपना रक्सीको घुड्कोसँगै निलियो । अहिले मेरो नसा-नसामा रक्सीको नशा छ । यो नशा नलिएसम्म म निदाउन पनि सक्दिन । अहिले हरदम एउटै गीत सुसाउँछु 'मेरो बेहोसी आज मेरो लागि पर्दा भो....।'
रविको कथाले के पुष्टि गर्छ भने किशोरावस्थाका केटाकेटी साथीको लहैलहैमा लागेर मात्र बिग्रन्छन् भन्ने कुरा सत्य होइन । यतिबेला कुनै पनि दुव्र्यसनीले उनीहरूको मन सजिलै पगाल्न सक्छ । किशोरावस्था अत्यन्तै जिज्ञासु हुन्छ । विषै पिउन पनि नहिच्किचाउने उमेर । आमाबुवाको असावधानीका कारण जिज्ञासु भएर पनि उनीहरू नशा लिन थाल्छन् । तसर्थ अभिभावकहरू विशेष सतर्क हुनुपर्छ । साना नानीहरू हिँड्दा लड्छन् कि भनी आमाबुवा धरालो लाग्छन्, तर किशोरावस्थामा पुगिसकेका सन्तानको धरालो को कतिसम्म लाग्नसक्छ ? अभिभावकलाई आफ्ना लागि जिम्मेवार हुने भनेको आफैले हो भन्ने हुन्छ । आˆना केटाकेटीकोे बानी-व्यवहारका विषयमा उनीहरू त्यति ख्याल राख्दैनन् तर यसो गरेर हुँदैन । अभिभावक सतर्क हुनुपर्छ । आफू रक्सी पिएर मोजमस्तीमा रम्ने, सिरियल र चलचित्र हेरेर संसार भुल्ने अनि छोराछोरीलाई पढ-पढ भन्दैमा उनीहरूले चाहेजस्तो कार्य गर्दैनन् । जस्तो रोप्यो उस्तै फल्छ भन्ने उखान अभिभावकहरूले सधैँ मनमा राख्नुपर्छ ।
ल्ागूपदार्थ के हो ?
साधारण मानिसले बुझ्ने भाषामा भन्दा ल्ाागूपदार्थ व्यक्तिको सोचाइ र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने रसायनिक पदार्थ हो । चुरोट, बिडी, सुर्ती, जाँड, रक्सी, भाङ, धतुरो, हेरोइन, फेन्सिडिल, कोकिन आदि लागूपदार्थ हुन् । एक गिलास दूध पिउँदा वा एक चम्चा मह चाट्दा हाम्रो भावना र व्यवहारमा भिन्नता आउँदैन तसर्थ यी लागूपदार्थ होइनन् । एक गिलास रक्सी पिउँदा वा एक चम्चा भाङ खाँदा मानिसको सोच र व्यवहारमा फरक आउँछ तसर्थ रक्सी एवं भाङ लागूपदार्थ हुन् ।
मानिसहरू ल्ाागूपदार्थ किन खान्छन् ?
लागूपदार्थ सेवन गर्ने कारण यही हो भनेर किटान गर्न सकिँदैन । पीर चिन्ता भाग्छ कि भनेर, खुसियाली मनाउन, एक्लोपनको साथीका रूपमा, प्रेममा धोका खाएपछि, साथीसंगीको दबाबमा, स्वाद थाहा पाउन वा अनुभवका लागि मानिसहरू लागूपदार्थ खान थाल्छन्  । जे-जस्तो निहँुमा खाए पनि लागूपदार्थको सेवन समस्याको समाधान भने होइन ।
लागूपदार्थ खान नहुने किन होला त ?
लागूपदार्थका कारण स्वास्थ्यमा पर्ने समस्या धेरै छन् । कुनै पनि किसिमको लागूपदार्थ पटक-पटक लिँदा मानिसलाई लत लाग्छ । उसको शरीर तथा मस्तिष्कले ती पदार्थ नभैनहुने महसुस गर्न थाल्छ । लागूपदार्थ सेवनले क्षणिक जोस-जाँगर वा आनन्द त आउँछ तर यो सधैका लागि हुँदैन । लत लागेपछि छोड्न गाह्रो हुन्छ । लागूपदार्थको सेवनले स्वास्थ्यमा धेरै समस्या देखापर्छ भन्ने कुरा नबुझी आनन्दका निम्ति सधैं सेवन गर्नतिर लाग्छन् । यसको निरन्तर प्रयोगले मस्तिष्क बोधो भई स्मरण शक्तिमा कमी आउँछ । मानिसलाई परनिर्भरताको स्थितिमा पुर्‍याउँछ । अझ कलिलो उमेरका केटाकेटीलाई नशाले चाँडो असर गर्छ । यसको लत बसे पढाइ-लेखाइ एवं करियर धरापमा पर्छ । नशाले शारीरिक एवं मानसिक रूपमा कमजोर तुल्याएर मानिसलाई मृत्युको मुखमा धकेल्छ । यसको व्यसन थालेपछि मानिसले दुव्र्यसनीको संज्ञा पाउँछ ।
लागूपदार्थको दुव्र्यसनमा नफस्न के गर्ने ?
किशोरावस्थाका केटाकेटीले आफ्नो जीवनलाई सही बाटोमा लान र कुलतबाट बच्न लागूपदार्थ तथा दुव्र्यसनका सम्बन्धमा जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ । कसैले लागूपदार्थ खान वा चाख्न भनेमा नाइँ भन्न सक्नुपर्छ  । समाज र जीवनका सम्बन्धमा लेखिएका पुस्तक पढ्ने बानी बसाले यस्ता लतबाट बच्न सहयोग पुग्छ ।
लागूपदार्थ सेवन गर्ने मानिसबाट सधैं टाढा बस्नुपर्छ । आमाबाबु यसको सेवन गर्छन् भने छुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ । आमाबाबुले पनि केटाकेटीले भन्नुअगावै आफूमा भएको कुलत छाड्न सके भने इज्जत रहन्छ । यसैमा सबैको भलोे छ ।
अब आउनुहोस इन्टरनेट र टिनएजर बारेमा
हिँजोआज बालबालिका एवं किशोर-किशोरीहरूको संसार केही अर्थमा साँघुरिएको छ । पहिले-पहिले यो उमेरकाहरू खेलेर समय बिताउँथे । अहिलेको विकसित प्रविधिले उनीहरूलाई सीमित क्षेत्रमा बाँधेको छ । यो क्षेत्र भौगोलिक परिवेशमा साँघुरो भए पनि सूचना एवं संसारसँगको सम्बन्धको मामिलामा भने निकै विस्तृत छ । उनीहरू इन्टरनेटमा समेटिँदै गएका छन् । विशेष गरी टिनएजरहरू सबैभन्दा बढी मोबाइल, टेलिफोन, आइपोड, कम्प्युटर गेम एवं वेभसाइटभित्र बाँधिएका छन् । अधिकांश घरमा बेभ सर्पिmङ, भिडियो गेमको आवाज नौलो कुरा रहेन । त्यसैले हिँजोआजका बालबालिका प्राविधिक ज्ञानमा निक्कै अघि छन् ।
अधिकांश अभिभावकमा आफ्ना टिनएजर बालबालिकाको तुलनामा हाइटेक ज्ञान कम छ । उनीहरू समयले विकास गरेको प्रविधिसित बालबालिका जति अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् । अभिभावकहरू बालबालिकाका छेउमा उभिएर उनीहरू के गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न नसकी चुपचाप टोलाएर बसेको पाइन्छ । जब बालबालिकालाई इन्टरनेट, कम्प्युटरको सुविधा उपलब्ध गराइन्छ तब त्यसको उपयोग उनीहरूले कसरी र केका लागि गर्दैछन् भनेर बुझ्नु जरुरी हुन्छ । आफूलाई हाइटेक प्रविधिका सम्बन्धमा ज्ञान नभएको बहानामा छुटकारा पाउने प्रयास गर्दा पछि समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । बालबालिकाले इन्टरनेटमा कुन साइट सफिर्ङ गरिरहेका छन् बुभ्fm्न सक्ने हुनुपर्छ । पछिल्ला प्रविधिका सम्बन्धमा हरेक आमाबुवामा केही
ज्ञान हुनैपर्छ ।
रमिलाकी छोरी नेहा पढाइमा अब्बल थिइन् । उनी नयाँ प्रविधिप्रति पनि उत्तिकै उत्सुक थिइन् । आमाबुवालाई उनीबाट कुनै किसिमको गुनासो थिएन । रमिलाले उनको कोठामा कम्प्युटर पनि लगाइदिइन् । छोरीले नयाँ प्रविधि एवं नवीनतम विषयका सम्बन्धमा जानकारी हासिल गरोस् भन्ने रमिलाको चाहना थियो । एकदिन राति अबेरसम्म नेहाको कोठाबाट निस्किएको आवाज र प्रकाशका कारण रमिलाले नेहाको कोठाको ढोका विस्तारै खोलिन् । आफ्नी आमा आएको चाल पाएपछि नेहाले तत्काल इन्टरनेट बन्द गरिन् । त्यतिबेला रमिलाले छोरीलाई केही पनि भनिनन् । भोलिपल्ट नेहा स्कुल गएको बेला रमिलाले उनको कम्प्युटर राम्रोसँग जाँच गरिन् । नेहाले च्याटिङ गरेको र इन्टरनेटमा अनेकौं वेभसाइट सर्फ गरेको पाइन् । ती वेभसाइट जानकारीमूलक भन्दा बढी अश्लील र गलत दिशातर्फ अग्रसर गराउने
खालका थिए ।
इन्टरनेट अथाह जानकारीको भण्डार हो । यसबाट प्रशस्त लाभ मिल्छ । सञ्चार माध्यमको यो नयाँ साधनले बालबालिकाको क्षमता बढाउँछ । यसले उनीहरूको सोच, सिर्जनात्मकता एवं व्यक्तित्व विकासमा लाभ पनि पुर्‍याइरहेको छ । हामी कम्प्युटर र सेलफोनको एउटा त्यस्तो संसारमा प्रवेश गरिसकेका छांै, जहाँ बालबालिकालाई नयाँ प्रविधिबाट वञ्चित राखेर केही फाइदा छैन । कुरा मात्र यत्ति हो, नयाँ प्रविधिबाट लाभ लिन रोक्न हुँदैन तर केही नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ ।
कम्युनिकेसन प्रोफेसर जेफरी कोलका अनुसार इमेल गर्ने, इन्टरनेटमा गीत सुन्ने र फिल्म हेर्ने जस्ता कार्यबाट टिनएजरहरू अराजक बन्नबाट रोकिन्छन् । यो प्रविधिले सम्बन्ध विकसित गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । प्रोफेसर जेफरी भन्छन्-'इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरूले आफ्नो परिवारका साथमा त्यति नै समय बिताइरहेका छन् जति नगर्नेले बिताउँछन् । सेलफोन संस्कृतिले आमाबुवा र बालबालिकाबीच निकटता पनि ल्याएको छ ।'
सामान्य ज्ञान र शिक्षासम्बन्धी अनेकौं जानकारी इन्टरनेटबाटै प्राप्त हुन्छ । करिब ६० प्रतिशत किशोर केही न केही रचनात्मक काम गर्छन् । उनीहरू साहित्य लेख्ने एवं पढ्ने, फिल्म बनाउने आदि सिर्जनात्मक काममा जुट्छन् । यी कार्य इन्टरनेटको सहयोगबाट सम्भव हुन्छन् ।
इन्टरनेटले तनाव घटाउन पनि सहयोग गर्छ । यसबाट अनेकौं महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुन्छ । बालबालिकाहरू विश्वव्यापी सूचनाबाट अपडेट भैरहन्छन् ।
किशोरावस्थामा सेक्सी पोज हेर्नु, यौनप्रति उत्सुक हुनु साधारण एवं प्राकृतिक कुरा हो । इन्टरनेटमा बालबालिकाले गलत साइट मात्र नभएर यौन उत्पीडनका घटनाको पनि जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् । सेक्सका बारेमा हुने गलत प्रयोग एवं नोक्सानी, यसको नकारात्मक असर अनि यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने सावधानीका सम्बन्धमा पनि इन्टरनेटबाट जानकारी उपलब्ध हुन्छ । उनीहरूले विभिन्न शैक्षिक साइट सर्फ गरेर ज्ञानको भण्डार वृद्धि गर्न सक्छन् ।
बालबालिकाहरू कम्प्युटरमा लगातार बस्न थालेपछि तिनको परिवार र साथीभाइसितको सम्पर्क विस्तारै कम हुन थाल्छ । उनीहरू एकलकाँटे एवं अन्तर्मुखी बन्दै जाने सम्भावना बढ्छ । छिमेकीहरूका सम्बन्धमा जानकारी हुँदैन, यसबाट उनीहरू विस्तारै असामाजिक बन्न पुग्छन् । तिनको सीमारेखा कम्प्युटर स्त्रिmन अगाडि बसेर, किबोर्ड र माउसमा हात दौडाउने बाहेक अन्यत्र बढ्दैन ।
बालबालिकाहरू हरेक प्रकारका साइट सर्फ गर्छन् । उनीहरू हरर साइटमा गएर भयानक दृश्यहरू हेर्छन् । सेक्सका बारेमा थुपै्र उत्पट्याङ कुराहरू जान्ने र प्रयोग गर्ने प्रयास गर्छन् । अनावश्यक च्याटिङ गरेर समय नष्ट गर्छन् ।
च्याटिङ गर्दा धोका हुने सम्भावना पनि हुन्छ । यसबाट भावनात्मक चोट लाग्न सक्छ । यसैगरी पोर्नोग्राफी साइटले बालबालिकालाई धेरै हदसम्म गलत प्रभाव पारिरहेको पाइन्छ । उनीहरू शारीरिक रूपले परिपक्व नहुँदै सेक्सको प्रयोग र अनुभवका लागि आतुर हुन्छन् ।
आमाबुवाले के गर्ने ?
बालबालिकाहरूसित प्रत्यक्ष कुरा गर्नुपर्छ । किशोर बालबालिका आमाबुवा एवं साथीहरूसित आफ्नो अनुभव र अनुभूति बाँडेर प्रतिक्रिया जान्ने प्रयास गर्छन् । उनीहरू व्यक्तिगत पहिचान खोज्छन् । अनावश्यक उपदेश मन पराउँदैनन् । आवश्यक अवस्थामा वा उनीहरू स्वयंले राय मागे
सही-गलत कुरा स्पष्ट बुझाइदिनुपर्छ ।
च्याटिङ गर्दा बुझेर सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने कुरामा सचेत गराउनुपर्छ । अनलाइन खतराका बारेमा अवगत गराउनुपर्छ । दुर्घटनाका सम्बन्धमा सचेत गराउनुपर्छ । आमाबुवाले कम्प्युटर जाँच गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा उनीहरूलाई सचेत बनाउनु आवश्यक छ । अनावश्यक एवं अश्लील बेभसाइट ब्लक गरिदिन सकिन्छ ।
इन्टरनेटबाट बालबालिकाले नकारात्मक फिडब्याक हासिल गरिरहेका हुन सक्छन् । यसबाट हुने नोक्सानका सम्बन्धमा तिनलाई बुझाउनुपर्छ । सकारात्मक प्रभाव पार्ने साइटको प्रयोगमा मात्र प्रेरित गर्नुपर्छ । यसका लागि ब्लगमा गएर आफ्नो रचनात्मकलाई मूर्तरूप दिन उत्साहित गर्नु राम्रो हुन्छ ।
अब अजिता बाट हामीले के सिक्ने त ?
(कलेज एम्बेसडर २००९)
काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा बीबीए अध्ययनरत अजिता भर्खरै सम्पन्न कलेज एम्बेसडर-२००९ प्रतियोगिताकी विजेता हुन् । सन् २००७ देखि सुरु भएको उक्त प्रतियोगितामा कलेजस्तरका विद्यार्थीको सुन्दरता, प्रतिभा र नेतृत्व क्षमताको मूल्यांकन गरिन्छ । २१ जना युवा तथा २१ जना युवती प्रतिस्पर्धी रहेको उक्त प्रतियोगितामा अजिता छात्रातर्फ कलेज एम्बेसडर चयन भएकी हुन् । कलेज तहका विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिइरहने अजिताले यो प्रतियोगिता ब्युटी विथ ब्रेनको संयोजन हो भन्ने कुरा बुझेर आफूले भाग लिएको बताइन् ।
बेस्ट परफर्मेन्स टाइटलसमेत पाएकी सिंह साधारण छिन् । रिसर्च गर्न मनपराउने अजिता आफूलाई सहज महसुस हुने पहिरन लगाउनुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै भन्छिन्-साडी मलाई मनपर्ने पहिरन हो तर म जिन्स, टिसर्ट, स्कर्ट, कुर्ता सबै लगाउंँछु, यो मेरो खुबी हो ।' कडा परिश्रम एवं आत्मविश्वासले आफूलाई कलेज एम्बेसडर बनाएको बताउने अजिता नोबेल ताथ म्यानेजमेन्टसम्बन्धी पुस्तकहरू पढ्न रुचाउँंछिन् ।
राजनैतिक पारिवारिक पृष्ठभूमिकी अजिता पिएचडी गरेपछि मात्र राजनीतितर्फ लाग्ने बताउंँछिन् । बुवा परमेश्वरप्रसाद सिंह तथा आमा शशि सिंहका एक छोरा र एक छोरीमध्ये कान्छी अजिता अहिलेका युवाहरूलाई सुझाव दिन्छिन्-अहिलेका युवाहरू राजनीतिलाई फोहोरी खेल मान्छन् तर त्यसो होइन देशलाई अहिले नयांँ नेतृत्व चाहिएको छ । अबका युवाले गहन जिम्मेवारी बहन गर्न सके राष्ट्रको भलो हुने थियो ।
सानैदेखि उद्यमी बन्ने सपना पालेकी अजिता अहिले पढाइ सिध्याउने धुनमा छिन् । अजिता भन्छिन्-मेरो पहिलो काम पिएचडी सिध्याउने हो तर १० वर्षपछि राजनीतिमा पनि आउन सक्छु । किनभने हाम्रो देशलाई सक्षम, सबल र नेतृत्वदायी युवाको आवश्यक छ ।'
बिहानको कक्षा सिध्याएर घर आएपछि रिपोर्ट बनाउने, गुगलमा रिसर्च म्याटर सर्च गर्ने अजिता हप्तामा ६ दिन पढाइ र कामलाई समय दिन्छिन् भने शुक्रबार एकदिन पार्टीहरूमा सहभागी हुन मन पराउँछिन् । हप्तामा ६ दिन बिहान ४ बजे उठ्ने अजिता शनिबार भने दस बजेसम्म सुत्छिन् । कडा परिश्रम, आत्मविश्वास र जानेका कुरा व्यक्त गर्न सक्ने खुबीलाई सफलताको कसी मान्ने अजिता कडा परिश्रमका बीच रमाइलो गर्न मन पराउँछिन् ।
अजिता भनिन्-सानो योगदानले पनि धेरै काम हुन्छ, तसर्थ सबै मिलेर देशका लागि केही गरौं ।
प्रस्तोता - रोजिना शाक्य
विभिन्न पत्र पत्रिका बाट
Posted by नेपालको सम्झना at 11:42 PM
0 comments to “मेरो बेहोसी पर्दा भयो”